सुनिश्चतको नवौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
इटहरी : सुनसरीको इटहरीस्थित सुनिश्चित महिला कृषि सहकारी संस्थाको नवौँ साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । संस्थाकी अध्यक्ष रेनुका सुवेदीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा चर्चित लोक गायिका गंगा गौतमले विभिन्न गीतहरू गाएर उपस्थित सेयर सदस्यहरूलाइ मनोरञ्जन दिलाएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा सहकारी स्थापना देखि हालसम्म आइपुग्दा विभिन्न माध्यमहरूबाट सहयोग तथा योग्दान पुर्‍याउने विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । त्यस्तै सहकारीमा लामो समयदेखि अध्यक्ष भएर सहकारीलाई यो स्थानसम्म ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान पुर्‍याउने संस्थाकी अध्यक्ष रेणुका सुवेदीलाई पनि कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूले सम्मान गरेका थिए ।
त्यस्तै सहकारी भित्रै आवद्ध ज्येष्ठ नागरिक गायत्रा दाहाल, एकल महिलातर्फ सजा दाहाल, मासिक बचतकर्ता उषादेवी धमलालाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा गत वर्ष सम्पन्न प्लस टुमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल सेयर सदस्यका छोरा छोरीहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । यसरी सम्मानित हुनेहरूमा छात्रातर्फ जुना कटुवाल, छात्रतर्फ दर्शन कोइराला र हिमाल दंगाल रहेका छन् ।
कार्यक्रममा संस्थाकी अध्यक्ष रेनुका सुवेदीले सहकारीले वर्षभरी गरेको प्रगति विवरण तथा आगामी योजनाहरूको बारेमा उपस्थित सेयर सदस्यहरूमाझ प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि इटहरी उपमहानगर वडा नं २ का वडाध्यक्ष हर्क मगरले अन्य सहकारी संस्थाहरूको तुलनामा सुनिश्चित सहकारीले स्थापनाको छोटो समयमै बेग्लै पहिचान बनाएर भविष्य समेत नाम अनुसारकै सुनिश्चित गरिसकेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । कार्यक्रममा संस्थाकी उपाध्यक्ष सुभद्रा प्याकुरेलले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिइन् भने विशिष्ट अतिथिहरू इटहरी उपमहानगरकी सहकारी तथा कृषि शाखा प्रमुख गंगा घिमिरे, महिला सीप विकाश केन्द्र इटहरीकी अध्यक्ष राधिका थापा, सहकारीका सल्लाहाकार कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत अन्यले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
विभिन्न समयमा कृषि सम्बन्धि फलफुल लगायत तरकारीजन्य बिउ र बिरूवाहरू वितरण गर्दै आएको उक्त सहकारीले सम्पन्न साधारण सभाबाट नयाँ समिति चयन गर्नेछ ।
हस्तकला व्यापार मेला शुरु
काठमाडौं : १८ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १६ औं कलाप्रतियोगिता शुक्रबारबाट हायात होटल बौद्धमा शुरु भएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा शुरु भएको उक्त मेला मंसिर ५ गतेसम्म चल्ने छ । मेलाको शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तकला देशको कला र संस्कृतिको पहिचान भएको बताउँदै यसलाई विश्वबजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । हस्तकलाको विकास र सरंक्षणको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको र सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए ।
हस्तकला एक अमुर्त कला भएको भएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले कोरिएका चित्रहरु, मूर्ति, विभिन्न साँस्कृतिक पहिचान सहितको कलाले धर्म संस्कृतिको पहिचान प्रदान गर्ने भएकोले यसलाई संरक्षण गर्दै पुस्तान्तरण गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । सरकार हस्तकला क्षेत्रको संरक्षणका लागि तयार रहेको बताउदै कुनै ऐन तथा नियम बनाएर अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने उनले बताए ।
मेलाको अवलोकनमा कलाकारहरुको कला, मिहिनेत र परिश्रम देख्दा आफु खुसी भएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । देउवाले भने, ‘नेपालीको पहिचान कायम राख्न कालिगडहरुले परम्परागत, आधुनिक शैलीमा मिहिनेत गरेर सुन्दर मुर्ति र विभिन्न कलाकृतिका सामाग्रीहरुले मेलालाई अत्यन्त सुन्दर देखाएको छ ।’
कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले देशको धर्म, संस्कृति र पहिचान नै हस्तकला भएको बताएका थिए । मन्त्री आलेले देशको अर्थतन्त्रमा हस्तकलाको महत्व अधिक रहेकाले हस्तकलाका उद्यमीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ पेशामा लाग्न आग्रह गरेका थिए । साथै उनले सरकारले हस्तकलाको विकास तथा व्यवसायीकरणको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष तथा मेला संयोजक रविन्द्र शाक्यले हस्तकलाको पहिचान र संरक्षणको लागि यो वर्ष हस्तकलाको वर्ष घोषणा गरेको जानकारी गराए । शाक्यले सरकारले हस्तकलाको विकास, संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादित बस्तुको प्रयोग गर्न खरिद ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । साथै उनले हस्तकला हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय वा अन्य सरकारी संस्थाको लागी पहल सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
मेलामा विभिन्न हस्तकला विधाका १ सय २० भन्दा बढी स्टल रहेको छ । मेलामा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरिएको छ । मेलामा ७० वर्ष नाघेका र हस्तकलाका उत्कृष्ट निर्यातकर्तालाई सम्मान गरिएको छ । महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्रभाइ शाक्यले मेलाको विषयमा विस्तृत प्रकाश पार्दै हस्तकला व्यवसाय उठानको लागि सबै लाग्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
‘सरकारले हस्तकलालाई पहिचान दिन सकेन’
हस्तकला भनेको विशुद्ध हातबाट निर्मित उद्यमीहरुको कला र मेहनतको उपज हो । विभिन्न घरेलु सामानहरुको प्रयोग गरेर एउटा निश्चित बस्तु बनाएर बिक्री गर्ने र प्रदर्शन गर्ने हेतुले हस्तकला महासंघ नेपालले यहि मंसिर ३,४ र ५ गते काठमाडौं बौद्धस्थित हायात होटल परिसरमा १६ औं हस्तकला प्रतियोगिता तथा १८ औं हस्तकला मेला आयोजना गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोहीसँग सम्बन्धित रहेर १८ औं हस्तकला मेला सन्दर्भमा नेपाल हस्तकला महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मेला समितिका संयोजक रविन्द्र शाक्यसँग मध्यान्ह दैनिकका दिपेन्द्र श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
महासंघले १८ औं हस्तकला मेला किन आयोजना गर्न लागेको हो ? र यस्को उद्देश्य के रहेको छ ?
कोरोना महामारीले हस्तकलाको बजारलाई धेरै ठुलो असर पारेको छ । त्यसको असरलाई निराकरण गर्न महासंघले हस्तकलाकर्मी तथा उद्यमीहरुको विकास, बजारमा सहज पहुँच पुर्‍याउन र हस्तकलाका उद्यमीहरुलाई क्रेतासँग सिधै जोड्नको लागी १८ औं हस्तकला मेला अयोजना गर्न लागेका हौं । मेलाले नेपाली हस्तकलाको बजारलाई थप बिस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ । मेला कोरोना महामारीबाट थलिएका उद्यमीहरुलाई अघि बढ्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हुनेछ । मेलाले हस्तकलाका उद्यमीहरुलाई धेरै सकरात्मक उर्जा प्रदान गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौ ।
कोरोना महामारीपछि हस्तकलाको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ ?
कोरोना महामारीले हस्तकलाका सबै क्षेत्रमा समान असर गरेन । यसले परम्परागत हस्तकला र उद्योगका कामदारलाई असर गरेको देखियो भने नयाँ हस्तकलामा खासै असर गरेको देखिंदैन । हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार धेरै निराश भैहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।
हस्तकलाको बजार प्रवर्द्धन गर्न महासंघको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
पहिलो कुरा त कोरोना महामारीका कारण सम्पुर्ण हस्तकलाकर्मीहरु आक्रान्त भएको अवस्था छ । निराशाजनक यो अवस्थामा चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर नै यो मेला आयोजना गरेका छौं । यो वर्ष हामीले हस्तकला वर्ष भनेर घोषणा ग¥यौं । साथै महत्वपुर्ण कुरा अनलाईन पोर्टल ‘ई–कला नेपाल’ सुरु ग¥यौं । अब देशको जुनसुकै स्थान बाट आफ्नो शिपयुक्त सामान निःशुल्क रुपमा सो ई–कला नेपालबाट बिक्री गर्न सकिने छ । साथै हामीले यो वर्ष भर्चुअल र अन्य विभिन्न सिकाईमुलक कार्यक्रम पनि संचालन ग¥यौं । विगतका वर्षमा मेसिनरी सामान पनि हस्तकला भनेर स्टल ओगटेर बेचेका पनि देखियो । यो वर्ष मेलामा त्यस्तो हुन नदिन विशुद्ध हस्तकलाकै सामान त्यो पनि नेपाली नै हुनुपर्ने नियम राखेका छौ त्यस्तो भएन भने जुनसुकै समयमा स्टल हटाउन सक्ने अधिकार दिएका छौं । त्यसो गर्दा निश्चय नै हस्तकलाको सामाग्रीको राम्रो प्रर्वद्धन हुनेछ ।
हस्तकलाको बजार विस्तारका लागि स्थानीयस्तरमा हस्तकला मेला हुन नसक्नुका कारणहरु के के हुन् ?
प्रमुख त कोरोनाका कारण विभिन्न स्थानीय स्तरमा मेलाहरु हुनसकेका छैनन् । काठमाडौं लगायत देशभर हामीलाई प्रदर्शनी गर्न ठाँउको अभाव छ । हामीले केही दिन अघि उपत्यका संग जोडिएका तिन वटा जिल्ला भित्र उत्पादन भएका हस्तकला सामान भाटभटेनीको पार्किङमा प्रदर्शनी गर्‍यौं । प्रदर्शनी राम्रो भयो । यसले हामीलाई सकरात्मक उर्जा दिएको छ । त्यसैले हामी अब हायातमा प्रदर्शनी गर्न गइरहेका छौं । त्यहाँ थप राम्रो हुने विश्वास लिएका छौ ।
अहिले हस्तकला र हस्तकलाका सामग्री निर्यातको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
हस्तकलाको राम्रो सम्भावना भनेको विदेश निर्यात नै हो । दुई तिन वर्षको अन्तरमा संचारमाध्यमहरुबाट हस्तकलाको राम्रो प्रचार भएको छ । नेपाली बजारमा ढाकाको कपडा, विभिन्न सजावट लगायतका सामाग्री आन्तरिक बजारमा धेरै प्रयोग भएको छ । त्यो हिसाबमा आन्तरिक बजार धेरै नै राम्रो छ । सम्भावना भएर नै आन्तरिक बजार चलायमान भएर आएको छ, भने विदेश निर्यात पनि राम्रो हुँदै गएको छ । उद्यमीहरु आँफै निर्यात गर्न सक्ने बनाउनको लागी हामी प्रयासरत छौं । त्यसको लागि उद्यमी कलाकारहरुलाई परिचय पत्र बाड्ने, उद्यमीलाई करको दायरमा ल्याउने, व्यावसाय दर्ता गर्न लगाउने, निर्यातका लागि एक्जिम कोड लिन लगाउने, भन्सारमा अनलाइन सिस्टम लागू गराउने आदि जस्ता कामहरु भइरहेका छन् ।
आन्तरिक बजार विस्तार गर्न हस्तकला महासंघको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
हामीले यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै नै काम गरेका छौं । विभिन्न संघ संस्थालाई तालिमहरु दिएका छौं । तालिमपछि रोजगारी बढेको छ । हस्तकला महासंघले ती हस्तकलाका सामान बिक्री गर्न ‘ई–कला नेपाल डट कम’ भन्ने पोर्टल नै निर्माण गरेर हस्तकला सामान बिक्रीको शुरु गरेका छांै । यसले हस्तकलामा नयाँ पुस्तालाई पनि आकर्षित गरेको छ । कोरोनाका कारण हस्तकला मात्र नभएर अन्य व्यवसाय पनि आक्रान्त भएको सर्वविदितै छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै असर परेको छ । सबै निराशा तिर गइरहेको अवस्थामा अलिकति भएपनि चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले हस्तकला उद्यमी र व्यावसायीलाई लक्षित गरी प्रदर्शनीमार्फत व्यावसाय विस्तार गर्न खोजेका छौं ।
हस्तकलाका सामान पाँचतारे होटलमा प्रदर्शनी गर्नुको कारण के हुन सक्छ ?
अघिल्ला वर्षहरुमा भृकुटी मण्डपमा हस्तकला प्रदर्शनी गर्दा सरकारी र कुटनीतिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरु नआउने अवस्था भयो । त्यहाँको संरचनामा पार्किङको अवस्था राम्रो नभएको, शौचालयको समस्या भएको, आदी विभिन्न कारणले गर्दा सरकारी उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरु, नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरु नआईदिने परिस्थिति झेल्नुपर्यो । अब त्यस्तो नहोस र देश विदेशका सबैलाई राम्रो वातावरणमा अवलोकन गराउन पाइयोस भनेर नै हायात होटलमा प्रदर्शनी गर्न लागेका हौं । हाम्रो हस्तकलाको गुणस्तर र क्षमता देश विदेश सम्म पु¥याउन पायौं भने आफ्नो देशमा प्रचार–प्रसार गरिदिन्छन् र विदेशबाट थप मागहरु पनि आउन सक्छन् ।
हस्तकलाको बजार विस्तारका लागि सरकारले कस्तो किसिमको योजना ल्याउन आवश्यक छ ?
सरकारले हस्तकलाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले बार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको पुरस्कार र उपहार दिएको भन्ने तथ्याङ्क छ । त्यसरी दिने पुरस्कार र उपहारमा नेपाली हस्तकलाको सामान प्रयोग गर्न सकिन्छ । हामीहरुले पुरस्कारमा हाम्रै उत्पादन हस्तकलाको सामान किन प्रयोग नगर्ने ? नेपाली व्युरोक्र्याटमा रहेको चार पाँच लाख कर्मचारी सबैलाई एउटा कोट नेपाली लगाउने व्यवस्था गरौं । झण्ड्याउने परिचय पत्र ढाकाको कपडाले बनाइदिउँ । विदेशी कपडा लगाउँदा पैसा विदेशमा गयो । पिविसी कार्डमा परिचय पत्र छाप्नु भन्दा नेपाली कागज प्रयोग गरौं । हस्तकलाको आन्तरिक बजार बढाउने यो महत्वपुर्ण उपाय हुनसक्छ ।
हस्तकलाको विकासको निम्ति सरकारी नीति कस्तो छ ? सरकारको तर्फबाट कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
नेपाल सरकारले वार्षिक १० अर्ब निर्यात हुने हस्तकलालाई प्राथमिकता नै दिएको छैन् । कच्चा पदार्थको ठुलो अभाव छ । नीतिगत रुपमा कुनै व्यवस्था छैन् । निजी क्षेत्रले जे जति कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्छन्, त्यसकै भरमा चलेको छ । तर उत्पादनको विषयमा हामी एकदमै सक्षम छौं । गुणस्तरयुक्त सामान बनाएका पनि छौं । तर सरकारको सहि नीति नभएको कारण हस्तकलालाई पहिचान दिन सकिएको छैन । हस्तकला हेर्ने कुनै सरकारी कार्यालय छैन् । हामीले धेरै मेहनत गरेर देशभरका सबै संस्थाहरुलाई जम्मा गरेर हस्तकलाको नीति बनाएर सरकारलाई बुझाएको आज आठ दश वर्ष भइसक्यो । तर सरकारी बेवास्ताले होला, हस्तकलामा कुनै नीति आउन सकेन् । हस्तकला हेर्ने मन्त्रालय, विभाग नहुँदा हाम्रो बारे बुझने र समस्या सुन्ने अवस्था छैन् । हाम्रो समस्या हेर्न एउटा सरकारी निकाय खडा गरिदिन जरुरी छ । सम्भव भए मन्त्रालय, नभए विभाग खडा गर्न जरुरी छ ।
नेपाली हस्तकलाको माग बजारमा कति छ ?
नेपाली हस्तकलाको मागको अवस्था राम्रो रहेको छ । आन्तरिक बजार स्थिर नै छ । चाड पर्वमा हरेक वर्ष राम्रो खपत हुने गरेको छ । विदेशीले पनि नेपाली हस्तकलालाई उत्तिकै मन पराउँछन् । टेक्सटाइल प्रडक्टहरुको विदेशमा तिन गुणासम्म माग बढेर आएको छ भने चीनमा धातुकला मूर्तिकलाको माग धेरै छ । हाम्रो समस्या भनेको सामान विदेश निर्यात गर्नमा रहेको छ । फ्लाइट चार्टड गरेर सामान निर्यात गर्दा महंगो पर्न जान्छ । भएको सामान नै निर्यात गर्न नसक्दा अरु थप सामान उत्पादन गर्न समस्या भएको छ । त्यसैले हामीले मेलाको मुख्य उदेश्य नै यहि विषयलाई बनाएका छौं ।
नेपाली सामानको आफ्नै ट्रेडमार्क छैन, त्यसैले विश्व बजारमा गुणस्तर मापन गर्न, चिन्न र प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ भनिन्छ नि ?
०७८ सालको मौद्रिक नीतिमा एकिकृत ट्रेडमार्कमा जाने कुरा आएको छ । व्यक्तिगत रुपमा ट्रेडमार्कमा जान नसके पनि हामी हस्तकलाकर्मीहरुले सामुहिक रुपमा जाने योजना बनाएका छौं । हामीले यसलाई एउटा अवसरका रुपमा पनि लिएका छौं । मंशिर महिना भित्रमा ट्रेडमार्कमा जान सकियो भने राम्रो हुन्छ । डकुमेन्ट बनाउन सुरु भइसकेको छ । नीतिमा, प्याकेजिङ र लेबलिङमा समस्या छ । लाखौं पर्ने हस्तकलाको सामान सामसुङ टिभीको कभर बाकसमा प्याक गरेर पठाइरहेका छौं । लेबलिङ र प्याकेजिङ कसले गर्ने ? यो सबै नीति नभएर भइरहेको छ । भोली विदेशी कम्पनीले हाम्रो सामान कपी गरे हामीले दाबी गर्न सक्छौं । ट्रेडमार्क हुँदा हामी अन्तराष्ट्रिय संस्था वाइपामा आफै रजिष्टर हुन्छौं । त्यसमार्फत कपीराइटको मुद्दामा लड्न सक्छौं । यो सबै काम निजी क्षेत्रले एक्लै सक्दैन । सरकारसँग मिलेर गर्नुपर्छ । तर सरकारलाई हामीले यो विषय बुझाउन सकिरहेका वा बुझाए पनि सरकारी बेवास्ताले काम हुन सकेको छैन ।
अहिले गर्न लाग्नुभएको प्रदर्शनीमा कति सहभागीको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
विगतको समयमा भृकुटीमण्डपमा गरिने प्रदर्शनीमा झण्डै दुई तीन लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने गर्दथे । अहिले कोरोनाको अवस्था सकिइनसकेको अवस्थालाई हामीले स्विकार गर्नुपर्दछ । यो समयमा कम्तिमा दैनिक २० देखि २५ हजार जनाले अवलोकन गरे भने हामीले प्रदर्शनी सफल भएको मान्नेछौं ।
नेशनल बैंकिङ र गोर्खाज फाइनान्सबीच सम्झौता
काठमाडौं : नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट लि. र गोर्खाज फाइनान्स लि.बीच तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमका बीच नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट र गोर्खाज फाइनान्सबीच तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यस सम्झौताअनुसार एन.बी.आईले गोर्खाज फाइनान्सका कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता विकासका लागि विभिन्न तालिमहरु उपलब्ध गराउने छ । उक्त सम्झौतापत्रमा गोर्खाज फाइनान्सकातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लालबहादुर थिङ र नेशनल बैंकिङ ईन्ष्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
फर्मा ब्राण्डको ट्याक्टर नेपाली बजारमा
काठमाडौं यती टेक्निक फर्मा प्रालिको भगिनी संस्था कृषि समूह नेपालले नेपालका लागि फर्मा ट्याक्टरको एकमात्र आधिकारिक आयातकर्ता भई बिक्री वितरण थालेको छ । सोल्टी होटलमा एक कार्यक्रमका बीच उक्त ट्याक्टर बिक्री वितरणको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्घाटन गरे । उद्घाटनको क्रममा मन्त्री शर्माले कृषकका लागि ट्याक्टर एकदमै उपयोगी भएकाले भारतबाट पाटपुर्जा ल्याई नेपालमै उत्पादन थाल्ने हो भने नेपाल सरकारले चाहिएजति जग्गा उपलव्ध गराउने र उद्योग संचालनका लागि प्रति यूनिट ६ रुपैयाँमा विद्युत उपलव्ध गराउने बताए ।
नेपालमा फर्मा ब्राण्डको उन्नत प्रविधि युक्त ट्रयाक्टर लन्च गरिएको कृषि ग्रुपका अनिल श्रेष्ठले बताए ।
फर्मा ब्राण्ड परम्परागत युरोपेली विरासतमा कृषि र मोटर वाहन डोमेनमा ७५ वर्ष पुरानो कम्पनी हो । यो बोटोसानीको रोमानियाली टाउनशिपमा आधारित भएको र रोमानियाली स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता गरिएको ट्याक्टर हो । भारतको स्वामित्वमा रहेको फमर्म ब्राण्ड युरोपेली प्रविधिको साथ भारतमा बनाइ विश्वमा निर्यात भइरहेको छ । कम्पनीले विशेष गरी कृषिमा समुदायको गुणस्तर सुधार्न, उद्यम र उद्यमशीलतामा पहल गर्न र एक विश्वसनीय व्यापार साझेदार बन्न उक्त कार्यक्रम गरेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतका प्रमुख अजय मल्लिकले फमर्म ब्रान्ड र यसको भिजन मिशन प्रस्तत गरेका थिए । कृषि समूहका अध्यक्ष तेज विक्रम थापाले यसको भगिनी सरोकार यति टेक्निक फार्म प्रालिको ग्राहकहरूलाई निर्वाधरूपमा सेवा दिनका लागि नेपालभर बिक्री र सेवा आउटलेटहरूको बलियो नेटवर्क बनाएको बताए ।
कार्यक्रममा नाडा र अन्य संघसंस्थाका विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने केही ग्राहकहरुलाई ट्याक्टरको चाबी हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
आरविवि मर्चेन्टको छैठौं साधारण सभा
काठमाडौं : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा संचालित सहायक कम्पनी आरविवि मर्चेन्ट बैंंकिङ्ग लिमिटेडकोे छैठौं वार्षिक साधारण सभा संचालक समितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी कविराज अधिकारीको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले आ.व. २०७७/०७८ मा १० प्रतिशत नगद लाभांश सहित वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्ताब पारित गरेको छ ।
साधारण सभामा प्रमुख अतिथि एवं बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले हाल शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित रहेको मर्चेन्ट बैकिङ्ग सेवालाई ग्रामिण क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने दीर्घकालिन सोच अनुरुप आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै लैजाने र दुरदराजमा रहेका जनताहरुले पनि मर्चेन्ट बैकिङ्ग सेवा लिन सकिने वातावरण बनाउने बताएको छ । मर्चेन्ट बैंकिङ्गका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले हाल २० करोड चुक्तापूंजी रहेको मर्चेन्ट बैंकिङ्गले इस्यु मेनेजमेन्ट, आरटिएस, पोर्टफोलियो मेनेजमेन्ट, अन्डरराइटिङ्ग, डिपोजेटरी पार्टिसिपेन्ट लगायतको सेवा दिई रहेको बताए ।
साधारण सभामा आरविवि मर्चेन्ट बैंंकिङ्ग लिमिटेडका संचालकहरु सरस्वती अधिकारी, देवेन्द्ररमण खनाल, पवन रेग्मी, केशब प्रसाद लम्साल, राजेन्द्रप्रसाद दाहाल, बैंकका उपकार्यकारी अधिकृतहरु देवेशप्रसाद लोहनी, शेयरधनिका तर्फबाट प्रतिनिधि एवं बैंकका विभागीय प्रमुख विनयरमण पौडेल, बैंकका कम्पनी सचिव भोलानाथ पौडेल, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकी सहायक रजिष्ट्रार कल्पना कुमारी बर्तौला, बाह्य लेखापरीक्षक सिए सुजन सुवेदी, आन्तरीक लेखापरीक्षक सिए एकराज सिग्देल लगायत मर्चेन्ट बैंकिङ्गका कर्मचारीहरुकोे उपस्थिती रहेको थियो । साधारण सभालाई कम्पनी सचिव खगेन्द्र उप्रेतीले सहजीकरण गरेका थिए ।
कोकाकोला र भाइबरबीच साझेदारी
काठमाडौं : कोकाकोला नेपालले राकुटेन भाइबरसँगको सहकार्यमा कोक एण्ड मील्सको थिम अन्तर्गत कोकाकोला अगमेन्टेड रियालिटी (एआर) भाइबर लेन्स ‘फूड र्याण्डमाइजर’ लन्च गरेको छ । नेपालमा १ करोडभन्दा बढी भाइबर प्रयोगकर्ताहरूले सो फिल्टरको मजा लिनसक्ने कोकाकोलाले जनाएको छ ।
आफू र आफन्तका लागि कोक तथा खाना संयोजन गर्न सकिने फिल्टरमा कोक र मम, कोक र पिज्जा, कोक र चाउमिनजस्ता लोकप्रिय कोक र खानाका संयुक्त प्याकेज देखिनेछ । जेनेरेट भएको एउटा कोक एण्ड मील्सको कम्बोमा फिल्टर आएर रोकिएपछि प्रयोगकर्ताले लेन्सलाई सेभ गर्न र कम्बो किनिदिन अनुरोध गरी आफ्ना साथीहरू, कामका सहकर्मीहरू वा परिवारलाई सजिलै पठाउन सक्नेछन् ।
पोखराका सात ठाउँमा आयो ‘सेभेन स्टेट फूड मार्ट’
पोखरा पोखरामा बढ्दो आधुनिक जीवन शैलीलाई मध्यनजर गर्दै सबै स्तरका ग्रहकहरुको रुचीलाई समेट्ने गरी एकै पटक सातै ठाउँबाट रेष्टुरेण्ट संचालनमा अएको छ । ‘सेभेन स्टेट फूड मार्ट’ नामक रेष्टुरेण्ट हालै संचालनमा आएको हो ।
पोखराको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड, गैह्रापाटन, रत्नचोक, जिरोकिलोमिटर, प्रस्याङ, विन्ध्यवासिनी र नदिपुरमा ‘सेभेन स्टेट’ले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । पानी पुरी र चटपट रेष्टुरेण्टको विशेषता रहेको संचालक मध्येका एक सन्तोष पराजुलीले मध्यान्हलाई बताए । नेपालमै पहिलो पटक मेसिन माध्यमबाट पानी पुरीको स्वाद ग्राहकले लिन पाउँछन् ।
करिब एक करोड लगानीमा संचालनमा आएको ‘सेभेन स्टेट’मा पानी पुरी र चटपट बाहेक फास्टफुडका सम्पूर्ण परिकार उपलब्ध छन् । फुटपाथमा पाइने पानीपुरी उही मूल्यमा ‘सेभेन स्टेट’ रेष्टुरेण्टमा उपलब्ध छ ।
रेष्टुरेण्टले ‘टेक वे’ सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने फास्टफुड शीघ्र उपलब्ध गराउने ध्येयका साथ रेष्टुरेण्ट संचालन गरिएको अर्का संचालक कृष्ण सुवेदीले बताए ।
उनका अनुसार ‘सेभेन स्टेट’ रेष्टुरेण्टमा ४० जनाले रोजगार पाएका छन् । बिहानको कलेजको समय सकेर दिउँसो काम गर्ने गरी कर्मचारीलाई व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
सेभेन साइट’ रेष्टुरेण्टलाई आगामी दिनमा अझै विस्तार गर्ने सोच सुवेदीको छ । हाल पोखरामा मात्र शाखा रहेको रेष्टुरेण्टलाई नेपालका अन्य शहरमा समेत संचालन गरिने लक्ष्य संचालकहरुले राखेका छन् । भीआईपी र मध्यम वर्गीय ग्रहकका साथै विद्यार्थीका लागि लक्षित गर्दै रेष्टुरेण्ट संचालन गरिएको र सस्तो र सुलभ दरमा फास्टफुडको परिकार उपलब्ध गराउने गरिएको पराजुलीले बताए ।
प्रविधिले कृषकलाई बनायो सहज
पाल्पा : पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका १ सघाहा अगुवा कृषक ऋषिराम अर्यालले विगत पाँच वर्ष देखि प्रविधि (थ्रेसर) को प्रयोग गरी धानबाली स्याहार्दै आएका छन् । धान झाट्ने र दाही हाल्ने काम एकै पटकमा हुने भएपछि थ्रेसर मेसिनबाट धान स्याहार्ने कार्यमा कृषकको आकर्षण बढेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘एक घण्टाको समयमा थ्रेसर मेसिनबाट करिव ५० मुरी धान झाट्ने र दाही हाल्ने काम एकै पटकमा भयो, कम लागत र छोटो समयमा खेती स्याहार्ने नयाँ प्रविधि गाउँमा आएपछि कृषकलाई धेरै राहत भएको छ ।’
कृषक अर्यालले एक घण्टाको तीन हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर धान भित्र्याएका छन् । कामदार खटाएर धान स्याहार्नु पर्दा समय र लागत पनि धेरै लाग्ने हुँदा थ्रेसर मेसिनबाट नै फाइदा हुने उनको अनुभव छ ।
‘थ्रेसरबाट धान स्याहार्न थालेपछि वस्तुभाउमा पनि जुकामाटे रोग कम देखा परेको छ, परालको पानीको सतहमा डुबेको भागमा जुकाका फूल बस्ने हुदा गाइभैंसीमा जुकामाटेको रोग देखापर्ने हुन्थ्यो, थ्रेसर लगाएपछि यस्तो समस्या कम भएको छ’ उनले भने ।
धान छिटो झर्ने, कम लागतमा धेरै काम हुने, कामदारको अभावमा सहज हुने हुँदा पनि पछिल्लो समय कृषकले प्रविधिको प्रयोग गरेर खेती लगाउने र स्याहार्ने गरेको रामपुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रामहरी पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार रामपुर नगरपालिकाले कृषकको माग अनुसार र विभिन्न पकेट तथा ब्लक कार्यक्रममा थ्रेसर मेसिन विभिन्न पनि सहयोग गरेको छ ।
‘गाउँ गाउँमा धान झाट्ने यन्त्रको प्रयोग बढ्दो छ, कृषकहरु पनि परम्परागत खेती प्रणालीलाई छाडेर आधुनिक प्रणालीतर्फ अगाडी बढ्दै गएका छन्, यसले गर्दा पनि कृषकहरु नयाँ नयाँ कृषि यन्त्रको प्रयोगमा अग्रसर हुँदै गएका छन्’ उनले भने ।रामपुर क्षेत्रमा हालसम्म करिव पन्ध्र वटा धान झाट्ने (थ्रेसर मेसिन) कृषि यन्त्र प्रयोगमा आएका छन् । दुई दिन सम्म लाग्ने काम एक घण्टामा सकिने भएपछि धान झाट्न कामदार लगाउनै छाडिएको बलबहादुर राना बताउँछन् ।
‘एक जना कामदारलाई धान झाट्न दिउँसोको काम लगाउँदा रु एक हजार ज्याला दिनुपर्छ, समय पनि धेरै लाग्ने, खर्च पनि धेरै हुदो रहेछ, हिजोआज धान झाट्ने यन्त्र (थ्रेसर मेसिन) ले दुई तीन दिन लाग्ने काम एक घण्टामै सिध्याउँछ’ कृषक रानाले भने । भनेको समयमा धान झाट्ने कामदार नपाउँदा पनि कृषकले निकै सास्ती खेप्नुपथ्र्यो । धान झाट्ने यन्त्रप्रति (थ्रेसर मेसिन) कृषकको आकर्षण निकै रहेको विजयपुर कृषि सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश रेग्मी बताउँछन् ।
पाल्पाका विभिन्न गाउँ गाउँमा धान झाट्ने यन्त्र (थ्रेसर मेसिन) को प्रयोग हुन थालेपछि कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कम लागत र मेहनतमा छिटो र छरितो धान स्याहार्न पाइने भएपछि धान झाट्ने यन्त्रतर्फ यहाँका कृषकहरु आकर्षित भएका हुन् ।
पाल्पाको रामपुर, खानीछाँप, यम्घा, कसेनी, सिद्धेश्वर, खस्यौली, बौघापोखराथोक, रम्भा, अर्गली, दोभान, भुवनपोखरी, चिर्तुङ्गधारा, सत्यवति, माडीफाँट लगायतका स्थानमा धान झाट्ने यन्त्र (थ्रेसर मेसिन) पुगेसँगै कृषकलाई धान स्याहार्न सजिलो भएको छ । जिल्लामा बढ्दो यान्त्रिकरणको विकास र प्रयोग हुदै जाँदा भने काम गरेर खाने श्रमिक, मजदुरहरु विस्थापित हुन पुगेका छन् । कृषि र अन्य क्षेत्रमा विभिन्न यान्त्रिकरणको प्रयोग हुन थालेपछि ज्यालादारीमा काम गरेर जीवन गुजारा गर्ने सयौँ श्रमिक, मजदुरहरुको आम्दानीको स्रोत नै गुम्दै गएको छ ।
परम्परागत कृषि औँजारका सट्टा खनजोत गर्ने हाते ट्याक्टर, पावर टिलर, विउ रोप्ने मेसिन, धान काट्ने मेसिन, गहुँ ठटाउने, धान झाट्ने यन्त्रको बढ्दो प्रयोग हुन थालेपछि कृषि व्यवसायमा आवद्ध कृषि मजदुर विस्थापित हुन पुगेका हुन् ।
सुन तोलामा ५०० ले बढ्यो
काठमाडौं : नेपालको सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रू ५०० ले बृद्धि भएर रू ९४ हजार ८०० कायम भएको छ।
सोमबार सुन प्रतितोला रू ९४ हजार ३०० मा कारोबार भएको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रू ९४ हजार ३०० रहेको छ । अघिल्लो दिन तेजाबी सुन प्रतितोला रू ९३ हजार ८०० तोकिएको थियो।
त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य सोमबारका तुलनामा रू १० ले वृद्धि भएर रू एक हजार २९० कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी शुक्रबार प्रतितोला रू एक हजार २८० मा कारोबार भएको थियो। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ८६६ डलर आसपासमा कारोबार भइरहेको छ।